Kulan DEG DEG ah oo la isugu yeeray Golaha Baarlabaanka maalinta Axadda - Muqdisho Online
Home Wararka Kulan DEG DEG ah oo la isugu yeeray Golaha Baarlabaanka maalinta Axadda
Kulan DEG DEG ah oo la isugu yeeray Golaha Baarlabaanka maalinta Axadda
Xildhibaanada Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa Maalinta berri oo Axad ah taariikhdu ay ku beegan tahay,17-da bisha March 2019, lagu wadaa in kulan deg deg ah ay ku yeeshaan Magaalada Muqdisho.
Ajendaha kulanka Xildhibaanada ayaa waxaa uu yahay hadal-jeedin laga dhageysanayo Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo booqasho rasmi ah Maanta ku yimid Magaalada Muqdisho ee Caasimadda dalka Soomaaliya.
Xildhibaanada Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa Caawa loo diray farriimo ku aadan in berri uu jiro kulanka deg deg ah, isla markaana Xildhibaanada laga doonayo in ay ka soo qeyb galaan kulankaas.
Sidoo kale kulanka ayaa waxaa lagu qaban doonaa dugsiga tababarka Ciidanka Booliska ee Jeneraal Kaahiye ee Magaalada Muqdisho.
Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa waxa ay muddooyinkii dambe ay ku maqnaayeen fasax, maadaama uu xiran Kal-fadhigii 4-aad ee Xildhibaanada Golaha Shacabka.
Si kastaba kulankan ayaa ku soo aadaya xili Magaalada Muqdisho oo ku sugan yahay Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo Maanta soo gaaray.
Previous articleRW Kheyre oo ku qasbay Xaad in uu ka laabto hadaladii uu sheegay iyo shirarka uu ka waday Muqadishu (Cadeymo)
Next articlemaxaa ka taagan Laas-Caanood
Farmaajo oo u magacaabayo Gud/Xig Bangiga Dhexe wiil uu adeer u...
Faysal Ali Axmed (Alteeso) - September 1, 2019
Carruur Ku Geeriyootay Walxa Qarxa Oo Ay Ku Ciyaarayeen
Sharmarke Xuseen - October 1, 2019